“In Xabsiga La Dhig Ayey Aheyd Ninka Isaga Oo Xildhibaan Ah yidhi ‘Xoolihi Umaddaan Xaraashay Oo Aan Xaday!’ Waa Haddii Sharciga Dalku Shaqeynayo?” Af-hayeenka Xisbiga WADDANI – somalilandtoday.com
Hanti-dhowraha qaranka, Xeer ilaaliyaha guud, Ciidanka Booliska iyo Maxkamaddaha dalkuba maanta in ay Xabsiga dhigaan ayey aheyd Ninka isaga oo Xildhibaan ah yidhi: Xoolihi umaddaan xaraashay oo aan xaday! waa haddii sharciga dalku shaqeynayo? dunida iyo dawladdaha ka jira qofka noocan u dhaqma ciqaabtiisu waa in xasaanadda laga xayuubiyo xabsina la dhigo.
Sheekh Aadan inta aan qof ahaan ka aqaano maaha shaqsi xoolaha umadda loo xaraasho hanti ku fillana Alle waa siiyey mar walbana cidda u canaanta waa kuwa cuno xoolaha Umadda waxaana hal-hays u ah: Adeer ka daaya ayaanu idin leenahay umadda iyo xoolaheeda sidan Barakallaahu Afikum.
Danta guud maxay tahay? Danta guud waa hanti dhul iyo dhisme ah oo dalka ku taal kana dhaxaysa dadka dalka leh. Tusaale ahaan, Dhulka danta guud ah sharciyan qof ma qaadan karo waxaana loogu tallo galay Cisbitaalo, Iskuulo, Garoomo, Masaajido, iyo goobo Bulshadu ku kullanto mana aha wax qof iyo laba toona iibin karaan qaadanna karaan!
Xariifki Shalay hadlayey wuxu inoo sheegay in uu iibiyey, dilaalay, lacagti qaaday, suuq madow ku dhammeeyey, dhididay, daalay, imikana diyaar u yahay in u intaas mar walba sameeyo! caqliga umadda ayey cay ku tahay laakin markay waddo xumo, qashin, biyo la’aan daad magaaladda doc walba ka galay kula xisaabtami waayeen waa garti in u wax walba ku yidhaahdo!
Sheekh Aadan wuxu bulshada dhexdeeda ka qoran yahay samafale umaddeed wuxuna hirgaliyey Mashaariic waaweyn oo laga xussi karo Xabaalaha baqiic, Barmaanijka Miskiin kal-kaal, dhismaha Jaamacadda Qur’aanka oo u hadda hawsheeda wado, run-sheegnimada iyo dhowrida xuquuqda muwaadinka.
Waxaans’e is waydiinaya haddii Sh. Aadan Aduun rabo muxu dawladdihii Cigaal, Rayaale, Siilaanyo uga qaadan waayey? Muxu Maayir Cawl, Maayir Jiciir uga qaadan waayey?
Madaxweyne waadigi ololaha ku galay ballankeenu waa sarreynta sharcige bal aynu dhowrno Tallaabadda aad ka qaado Ninkaas wuxuna hal xidhaale u yahay in sharciga dalku shaqeynayo iyo in aanu shaqeynaynin.
Barkhad Jaamac Batuun, Af-hayeenka Xisbiga Waddani